Prezedaanti Isaayyas Afawrqii fi mataan PP KOL. Abiyyii Ahimed Icciita dhoksaan har’a wal arganii maal mariiyatan? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooPrezedaanti Isaayyas Afawrqii fi mataan PP KOL. Abiyyii Ahimed Icciita dhoksaan har’a wal arganii maal mariiyatan?
Prezedaanti Isaayyas Afawrqii fi mataan PP KOL. Abiyyii Ahimed Icciita dhoksaan har’a wal arganii maal mariiyatan?
Icciitii Isaayyasii fi Abiyyii Qaruuxeen Qeerroo Bilisuummaa Oromoo kanneen isaan irratti mariiyatan irratti odeessa argateera .
Mariin Abbootii Irree lamaan Isaayyaasii fi Abiyyi Ahimed caamsaa 20/2021 mariiyan gabaabaatti akka armaan gadiiti gabaabsinee isiniif dhiyyeessineerra.
Dhiibbaa mootummoota dhihaa jalaa bahuuf waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa bifa federeeshiniin waliin hojjetu jechuun olola dhaabbataan facaasuun hatattamaan miidiyaaleen akka irratti hojjetan gochuu irratti waliif galaniiru akkasumas Uffata Reenjerii RIB waraana Eertiraaf hiruun waraanni Ertrea akka Itiyoophiyaa keessa hin jirre fakkeessuun gabaasaa miidiyaaleen irratti hojjechuu akka qaban irratti waliif galaniiru.
Waraanni Eertiraa Tigraay keessatti hirmaate 29,114 tahuu gabaasaa perezedaantiin Isaayyas Afwarq dhiyyeesseen hunda isaaniif bifa beenyaa fi miindaan Itiyoophiyaan Qarshii Biliyoona 4.82[4.82 billion birrs] akka Itiyoophiyaan kaffaltuuf Kun herregamee Isaayyaas Afawarq qabatanii dhufanii gabaasa isaa Abiyyiif dhiyyeessaniin booda Abiyyiin kaffaluuf walii galeera.
Waraanni Eeritaa 9349 ajjeefamaniiru, kaan madaa’aniiru. Kanneen madaa’aniifis tahe kan ajjeefaman maatii isaaniif qarshii kuma 150tu mataa mataan kaffalamaaf. walii galatti Qarshii Itiyoophiyaa Biliyoona 1.402 [ 1.402billion birr] kaffaluuf Abiy walii galeera.
INSA Operation office, Federal Police kutaa Qorannoo yakkaa, Addis Ababa Police Kutaa qorannoo yakkaa fi surveillance keessatti namni lama shaabiyaa keessaa filamanii koree tahanii muudamuu akka qaban Isaayyasii fi Abiyyiin walii galanii jiru
RIB keessatti kutaa logistics fi quunnamtii keessatti Lammiin Ertiraa namootni sadii sadarkaa garaa garaan akka muudamanis walii galaniiru.
Hidhamtootni siyaasaa addatti TPLF fi Shanee(akka isaan jedhanitti) yoo barbaachisaa tahe akka Asmaaraatti hidhamanii qorataman walii galteerra gahanii jiru.
Tikni biyyoolessaa Ethiopia bifa command post taheen bula. Koreen lama Eritrea tokko Ethiopia tahanii torbanitti gabaasaan waajjira Pirezedaantiif Isaayyaasiif ergama (Asmaraatti)
Humna Qilleensaa[ Aviation ]keessatti keessummessitootni xiyyaaraa(Hostess) dubartoota Eritrea keessaa wal qixa Itoophiyaa filamanii dorgomuu akka qabanii fi Carraan wal qixa kennamuu akka qabus walii galameera Fkn Ethiopia 50 yoo tahe Eritrea 50 taha jechuudha.
Galmeen hidhamaa siyaasaa fi murtiin irratti darbe gara digital jijjiiramee Eritreadhaaf ni kennama.
Rookkettii TPLF gara Asmaraatti dhukaasteen bu’uuraaleen qarshii miliyoona 870 tahu baduu gabaasaan Isaayyaas Abiyyiif dhiyyeesseen Itoophiyaan ni kaffalti jechuun Abiyyis walii galee jira.
Walii galaan lola TPLF waliin taasifameen kisaaraa Ertrea irra gaheef Itiyoophiyaan Qarshii milyoona 7.097 [7.097 billion birrs ]Eritreaf kaffaluuf walii galtee iccita dhoksaa guyyaa har’aa caamsaa 20/2021 Isaayyaasii fi mataan pp Abiyyiin waliif galaniiru.
Akka walii galtee Isayyaasii fi Abiyyiitti Maallaqni Ertreaaf kaffalamu hundi doolaraan kaffalama.
Ethio Telecom gara dhuunfaatti jijjiiruuf doolarri company caalbaasii moo’een Itiyoophiyaaf kaffalamu kallattumaan Eritreaf akka kennamus waltajjii dhoksaa marii har’aan Abiyyiin Isaayyaasiif waadaa galee jira.
Shaabiyaan masaraa Minilik irraa eegalee bakka Itiyoophiaan waamte hundatti argama.
Walii galteen kana erga xumuratanii Isaayyas Affawarq jila dhufe waliin akkuma dhoksaan dhufe dhokatee deebi’uun yeroo ammaa gara Asmaaraatti deebi’ee jira.
Abiyyiin qabeenya biyyaa dabarsee Ertreaf kennuun bulchitoota Addunyaa keessaa qabeenyaa biyya isaa dabarsee kan biyya Ollaaf kennuun nama calqabaa yoo tahu lammiilee Biiyittii dabvarsee biyya ollaatti akka hidhaman gochuu fi icciita biyyaa dabarsee dabarsee kennuunis hojii walii galtee mallatteessedha.
Abbootiin Irree lamaan Guyyaa har’aa Caamsaa 20/2021 Finfinneetti mariiyachuun murtoolee biyyaa fi lammiilee biyyittii balleessu irratti Abiyyiin Isaayyaasiin akka hogganamu godheera.
Barii Multimedia (BM): Oduu guyyaa har'aa fi Oolmaa Oromiyaa! fi
Ethiopia Oromiya: Oduu guyyaa har'aa fi Oolmaa Oromiyaa! ﻿
Hidhamtoota Siyaasaa M/murtii bilisaan lakkise yeroo isaan bahan humni tikaa balbala mana hidhaa irratti ukkaamsuun barame.
Bloody brothers: Eritrea, Africa’s gulag state, is on the march